Nezvedu - Weifang Sinnovation Medical Technology Co, Ltd.
Weifang sinnovation yekurapa tekinoroji co., Ltd. iri yakakwira tech tekinoroji kambani yakabatana yakagadziriswa naShandong zhongchuang mishonga yemapoka boka uye Brilliant Packaging LLC kubva kuUnited States.
Isu tiri nyanzvi inozvibata masks, ma disinfectants, bacteriostatic solution, mabhakitiriya ehutachiona, veterinary drug drug research and development, kugadzirwa nekutengesa kwamabhizinesi epamusoro.Iyo kambani inowana kukoshesa kukuru pakuunzwa kwevakakwira-mhando yekutsvagisa uye yekuvandudza vashandi, marudzi ese ehunyanzvi hwehunyanzvi hwevashandi account 70% yeavo huwandu hwevashandi, pakati pavo vamwe vane Chiremba dhigiri uye Master Degree. Iyo kambani yakatanga ISO yemhando yepamusoro manejimendi inovhara maitiro ese kubva kutsvagurudzo yemusika, kusimudzira zvigadzirwa, kugadzira zvinhu zvichitevera kutengesa, uye yapfuura eu CE certification uye isu FDA certification.Iyo kambani ine hunyanzvi hwekumanikidza, inowana kukosha kukuru kusvika pakuvhurwa nekudzidziswa kwematarenda esainzi netekinoroji, uye anovandudza chikoro chake mukushandurwa kwezviwanikwa zvesainzi uye zvehunyanzvi. Zvese zviviri zvakazvimirira zvehungwaru zvigadzirwa uye zvinotengeswa kumusoro-magumo zvigadzirwa zvakaenzana kukosheswa. Zvese zvigadzirwa zvekambani zvine kodzero dzekuzvimiririra dzezvivakwa uye vakawana mapepa gumi nematanhatu, kusanganisira maviri ekupa zvigadzirwa.
Iyo kambani ine akakwana zvidyarwa zvivakwa uye yakanaka kugadzirwa nharaunda. Iyo bhizinesi ine yakakwira otomatiki yekugadzira mutsetse uye inoshongedzwa neyekupedzisira-kugumisira yekuongorora michina, iyo inogona kuve nechokwadi chakanakisa chigadzirwa.With sayenzi nehunyanzvi hwekutarisira hutano, kambani inoteedzera kune indasitiri yekuwana zvesainzi uye zvehunyanzvi, mukuita kwakadzama , tarisa kune vatengi mhinduro, uye ramba uchikudziridza yepamusoro-tech zvemukati, yakanaka yekudzivirira maitiro, yakanakisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, ichave inofarira, yakatendeka, mutoro mune zvese ruzivo, uye iwe unobatana kugovera mufaro wekubudirira!